अञ्चल अस्पतालमा चिकित्सकको कोटा खाली, सेवाग्राही मर्कामा » खबरहरुको एउटै केन्द्र
अञ्चल अस्पतालमा चिकित्सकको कोटा खाली, सेवाग्राही मर्कामा
मंगलवार, जेष्ठ २३, २०७४ १४:३२ मा प्रकाशित !
मोरङ, जेठ २३ गते । पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित विराटनगरस्थित कोसी अञ्चल अस्पतालमा चिकित्सकको दरबन्दी खाली छ । तर सरकारले करारमा चिकित्सक नियुक्ति गरेर काम चलाइरहेको छ ।
उहाँले दावी गर्दै भन्नुभयो, “कोसी अञ्चल अस्पताल जत्तिको राम्रो र सबैका लागि पहुँच पुग्ने अरु कुनै अस्पताल छैन ।
PREVIOUS POST Previous post: एकैघरका दाजुभाइ वडाध्यक्षका उम्मेदवार बने
NEXT POST Next post: आजदेखि बजार अनुगमन गर्ने
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते मंगलवार, जेष्ठ २३, २०७४ १४:३२
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस मंगलवार, जेष्ठ २३, २०७४ १४:३२
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण मंगलवार, जेष्ठ २३, २०७४ १४:३२
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी मंगलवार, जेष्ठ २३, २०७४ १४:३२
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? मंगलवार, जेष्ठ २३, २०७४ १४:३२